Arimihii Aanu in Badan Ummada Uga Digaynay oo Baananka Yimid – Rasaasa News
Jun 16, 2010 Arimihii Aanu in Badan Ummada Uga Digaynay oo Baananka Yimid
Waxaanu in badan ummada Somalida Ogadeniya uga digaynay Jwxo-shiil, oo aanu kol hore aragnay in uu dadqalato yahay. Nasiib daro qaar ummada ka mid ah ayaan iyagu ilaa iyo intii aanu fariimaha sheegaynay aan na fahmin oo moodayey in aanu dacaayad wadno. Intii ay taageerada siinayeena Jwxo-shiil qolayaha la socdaa, waxaa uu galay dambiyadii loo haystay mooyee kuwo cusub kale oo badan.
Sidii aanu idiin sheegi jiray Jwxo-shiil, kolkii uu kala diray ururkii Jwxo, waxaa uu samaysatay nidaam Jabhada qabiil ah. Waxaana uu reer walba oo reerkiisa ah ka sameeyey rag reer miyi ah oo uu ku sheegay Jabhad, lagana maamulo Hargeysa iyo Nairobi.
Ragaasi waxaa loo geeyaa lacago, waxaana uu Jwxo-shiil, u sheegaa in ficilo dil ah ka fuliyaan magaalooyinka iyo degmooyinka ay degaan beelaha kale.
Sida aan la wada socono, ma jirto wax Jabhada ah oo ku dambaysa dhulka Ogadeeniya, hadana magaalooyinka waxaa si qarsoodi ah loogu dilaa dad. Dadkaas waxaa laaya dad reer miyi ah oo aan la fahmaynin, kuwaas oo ku shaqeeye nidaam uu dajiyey Jwxo-shiil. Maalintii qoryahooda way aastaan habeenkiina way la soo baxaan, waxayna fuliyaan dilal qarsoon, qaarkoodna magaalooyinka ayey degan yihiin kuligoodna waa reerka Jwxo-shiil.
Dhibaatooyinka horta leh ee ay haatan bilaabeen waxaa weeye ruuxii ay cidlo ka helaan way garacaan. Arimo aan waligood ka dhicin dhulka Somalida Ogadeeniya oo uu Jwxo-shiil ka keenay Eritrea, kana dhaadhiciyey beeshiisa. Arintan waxaa ku baxay dad badan, Jwxo-shiil, ayaana ka dambeeya dilalkaas qarsoon oo dhan.
Dilal gacan qaad ayaa ka dhacay dalalka reer galbeedka, waxaana ka dambeeyey Jwxo-shiil. Maalin dhawaydna waxaa uu ku baaqay in dad lagu dhibaateeyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka.
Dunuubtaas oo dhan uu Jwxo-shiil galayo, waxaa jira dad raali ka ah oo la socda. Dadkaas waxaanu haynaa magacyadooda iyo waliba meelaha ay degan yihiin, waxaana dhici doonta in aanu soo bandhigno dambiyada ay ogaayeen ee ayna waxba ka qabanin.
Waxaa nasiib wanaag ah, in aanu maanta ku guulaysanay in aan fahamsiino dadweynaha Somalida Ogadeeniyada dad qalatada qarsoon Jwxo-shiil.
War Deg Deg ah: Nin Dhalinyaro ah oo ay Kooxda Jwxo-shiil, Gaaris ku Gawracday